led display screen ထုတ်လုပ်သူ - အကြီးဆုံး display ထုတ်လုပ်သူ | Hola ဦးဆောင်သည်။
led display screen ထုတ်လုပ်သူ | led dispaly ကြမ်းပြင်ကြွေပြားမျက်နှာပြင်
More Information ကို
Professional က သာလွန်ကောင်းမွန်မှု
indoor LED display နှင့် outdoor series LED များ
ကုမ္ပဏီ၏အဓိက LED ရောင်စုံပြသမှုအင်ဂျင်နီယာထုတ်လုပ်မှု၊ မိုးလုံလေလုံစီးရီး LED မျက်နှာပြင်၊ ပြင်ပစီးရီး LED မျက်နှာပြင်၊ စင်မြင့်ငှားရမ်းခြင်းစီးရီး LED မျက်နှာပြင်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော LED မျက်နှာပြင်
DJ ဘားများတွင် LED display ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။
ရွေ့လျားမှု၏ ပြောင်းလဲနေသော ရစ်သမ်ဖြင့် ရွေ့လျားနေသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မီးရောင်များ၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော တေးဂီတနှင့် ဝိုင်များ၊ ပူပြင်းမှုနှင့်၊
စက်တင်ဘာလ 18, 2021
သေးငယ်သော LED မျက်နှာပြင်ကို မည်သို့တပ်ဆင်သင့်သနည်း။
အသေးစား LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အသုံးများသောနည်းလမ်းများသည် ဖရိန်၊ ယူနစ်ဘုတ်၊ ကေဘယ်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ ထိန်းချုပ်ကတ်၊
ဇူလိုင်လ 30, 2021
LED Splicing မျက်နှာပြင်ကို ဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
LED splicing မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်မှု ပုံကြမ်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း သင်ခန်းစာ။ LCD splicing screen လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော အဆက်အစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
LED နှင့် LCD မျက်နှာပြင်
LED display and LCD are two completely different light-emitting technologies. The former isalight-emitting diode that emits light, and
ဧပြီလ 22, 2022
LCD splicing screen တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆင့်များနှင့် လိုအပ်ချက်များသည် အဘယ်နည်း။
LCD splicing screen တပ်ဆင်ခြင်းသည် သာမန်ပြကွက်များနှင့် မတူဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တပ်ဆင်ရုံသာဖြစ်သည်။
OLED နှင့် Micro Mini LED ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
OLED ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များသည် သမားရိုးကျ LCD ဖန်သားပြင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက "ပါးလွှာသည်"၊ "ကွေး" လုပ်ပါ။ OLED ဆိုတော့ မလိုအပ်ပါဘူး။
မတ်လ 29, 2022
HOLA-LED ကို သင်၏ LED စခရင် ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 2009 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် indoor နှင့် outdoor led display များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဘတ်ဂျက်နှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တိုင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် LED display solution အများအပြားရှိသည်။
Hola-led LED ဖန်သားပြင်များကို နိုင်ငံပေါင်း 162 ကျော်သို့ အောင်မြင်စွာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
Hola-led နှစ်သက်မှုသည် သင့်အား LED ဖန်သားပြင်ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးရာတွင် ဆန်းသစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။
“မင်းက ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး LED မျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ညီအစ်ကိုပါ။ မင်းရဲ့တရုတ်စက်ရုံ၊ မင်းရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ မင်းရဲ့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ရေးစက်၊ မင်းရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ LED မျက်နှာပြင်နဲ့ ငါတွေ့ဖူးသမျှ မင်းရဲ့အကြင်နာဆုံး ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုတို့ကို သွားလည်တုန်းက ငါတကယ်ကို သဘောကျခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို၊ ငါ့သူငယ်ချင်းကိုလည်း မင်းဆီက ဝယ်ခိုင်းတယ်။"
“မင်းရဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ တွဲလုပ်ရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်။ မင်းတို့တွေက ငါ့ကို အမြန်ကိုးကားပြီး ငါ့ LED ဖန်သားပြင်ပရောဂျက်ကို အနိုင်ရဖို့ ပုံဆွဲတွေနဲ့ နည်းပညာစာရွက်အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးတယ်။ တပ်ဆင်တဲ့အခါ မင်းရဲ့အင်ဂျင်နီယာက အရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ မင်းရဲ့စူပါဝန်ဆောင်မှုကို ငါကြိုက်တယ်!"
"ကျွန်ုပ်၏ LED display ကြော်ငြာလုပ်ငန်းသည် လွန်ခဲ့သည့် 264 နှစ်အတွင်း 8% နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် LED display က ငါ့ကို ခေါင်းကိုက်စရာမလိုဘဲ ပိုက်ဆံရှာတယ်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းသည် ကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့အတူတကွ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။”
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ပါ-
+ 86 13553831871
နောက်ထပ် အချက်အလက် လိုချင်ပါသလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်တွင်အကောင်းဆုံး LED ဖန်သားပြင်ဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံ၊ အမြင်နှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်။
Facebook မှာ-,fWhatsapp linkedin-in ကို Youtube ကို
LED display အမှတ်တံဆိပ်များ COB ထုပ်ပိုးထားသော LED မျက်နှာပြင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED မျက်နှာပြင် ရောင်စုံ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော LED မျက်နှာပြင် LED Display ကို LED မျက်နှာပြင်ပြဿနာ LED အီလက်ထရွန်းနစ်မျက်နှာပြင် LED ကြမ်းပြင်ကြွေပြားမျက်နှာပြင် LED မီးခွက်ပုတီး LED အငှားပြကွက် ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင် ပြင်ပ LED ရောင်စုံ မျက်နှာပြင် ပြင်ပ P8 LED ရောင်စုံမျက်နှာပြင် ငှားရမ်းသော LED display ကို အသေးစား LED မျက်နှာပြင် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော LED မျက်နှာပြင်
ထိပ်တန်း LED display ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် HOLA-LED သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ ပေါ့ပါးသော၊ အသိဉာဏ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု၊ မြင့်မားသော ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော LED ဖန်သားပြင်များနှင့် LED ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများ၏ အခြားဝိသေသလက္ခဏာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Instagram ကို Facebook မှာ-,fYoutube ကို Whatsapp linkedin ကုန်ပစ္စည်းအမဲလိုက်ခြင်း။
သေးငယ်သောအကွာ LED မျက်နှာပြင်နှင့် mini LED မျက်နှာပြင်
P2 Indoor Small-pitch Display ၏ ထူးခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။
ဘယ် display က မျက်လုံးအတွက် ကောင်းလဲ ။
LED သို့မဟုတ် OLED ပိုကောင်းပါသလား။
LED ဖန်သားပြင် ဘယ်လောက်ကျသင့်သလဲ။
LED နံရံက ဘယ်လောက်ကျလဲ။
SHENZHEN HOLA LED LIGHTING CO., LTD